Home » Na-agbasa News Travel » Enweghị njem Ista maka Ndị Kraịst Palestian na Gaza
E nwere ihe dị ka Ndị Kraịst Palestine 1,100 dị na Gaza, ọtụtụ n'ime ha sitere na Ndị Kraịst oge mbụ na Palestine (ebe Iso Christianityzọ Kraịst malitere). Na nke mbụ ya, ndị ọchịchị Israel gọnarịara ndị Kraịst Palestine niile sitere na Gaza ikike njem niile iji mee ememme Ista dịka ha na-eme kwa afọ, site na ịhazi site na Betlehem na Jerusalem iji soro ụzọ Jizọs na Mbilite n’Ọnwụ.
Enwere ike ime ka mmachi dị otú ahụ zie ezi site na mkpa nchekwa?
Ndị na-ahụ maka ikike mmadụ na-ekwu, mkpebi Israel ịgọnarịrị ngagharị n'etiti Gaza na West Bank na Ista a bụ mmebi iwu ọzọ nke ikike Palestinians maka nnwere onwe ịgagharị, nnwere onwe okpukpe, na ndụ ezinụlọ. Mbelata mmachi nke ngagharị nke ndị Kraịst Palestian na-arụtụ aka na mmejuputa iwu nke 'amụma nkewa' nke Israel: amụma na-egbochi mmegharị n'etiti Gaza na West Bank nke na-eme ka nkewa dị n'etiti akụkụ abụọ nke mpaghara Palestine dị omimi.
Ọnụ ọgụgụ nke ikike a na-enye ala belata kwa afọ, ma tinyekwa iwu mgbochi blanket na onye ọ bụla n'okpuru afọ 55 - mana nke a bụ afọ mbụ nke ndị agha Israel ekweghị ka Ndị Kraịst Palestian si Gaza pụọ ​​gaa Jerusalem maka Ista.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-ekpe okpukpe Latin ma na-akara Ista na 21st nke Eprel afọ a, ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị Ọwụwa Anyanwụ Ọwụwa Anyanwụ ma na-eme Ista na 28th. Emume ọdịnala ha gụnyere ncheta nke Palm Sunday na Betlehem, mgbe ahụ, usoro sitere na Church of the Nativity na Betlehem na Church of the Holy Sepulcher na Jerusalem, ebe ndị Kraịst kwenyere na a kpọlitere Jizọs n'ọnwụ mgbe ọ nwụsịrị.
Dabere na nzukọ ndị ruuru mmadụ nke Israel bụ Gisha, "Onye Nchịkọba nke Ihe Omume Gọọmentị na Territories (COGAT) bipụtara oke nke Israel setịpụrụ maka ikike ezumike ka a ga-enye Ndị Kraịst Palestine bi n'okpuru ọchịchị Israel. Ihe ndị COGAT ekenyere maka ikike ezumike maka ndị bi na Ista a bụ naanị mmadụ 200 karịrị afọ 55, naanị maka ịga mba ọzọ; ihe a na-agbachitere ndị bi na West Bank na-ejedebe na ikike 400 maka ịga mba ọzọ, na nleta na Israel. Nke a pụtara na ezinụlọ Palestine kewara n'etiti Gaza, Israel na West Bank agaghị enwe ike ịkọ ụbọchị ezumike Ista ọnụ. Ọ pụtakwara na Ndị Kraịst niile nọ na Gaza anaghị ekwe ka ha banye n’ezinaụlọ ha na ebe nsọ ndị dị na Jerusalem na West Bank.
Mmachibido iwu ahụ na Ndị Kraịst Gaza na-abịa mgbe ndị isi agha nke Israel kwupụtara mmechi mmechi nke West Bank na Gaza maka ndị bi na Palestian n'izu nke Ememe Ngabiga, site na Eprel 19th ka 27th. Ndị isi agha nke Israel, nke na-achịkwa akụkụ niile nke ndụ maka ndị Palestaịn bi na-achị n'okpuru ọchịchị ha na Jerusalem, West Bank na Gaza, na-emechikarị mpaghara Palestine niile na igbochi ndị Palestaịn ịgagharị n'etiti obodo Palestian n'oge oge ezumike ndị Juu.
Na 2016 ma ọ dịkarịa ala, ndị Palestian Christian 850 si na Gaza City Strip gara ememme Ista na Betlehem ma biri na East Jerusalem mgbe ndị ọchịchị Israel kwetara inye ha ikike.
ETN Hero: Cordelia Igel, onye ndu otu na Vox Restaurant, Grand Hyatt Hotel Berlin
Sri Lanka Development Tourism, US na ndị ọchịchị Britain na-adọ aka na ntị maka mmegide mwakpo ụjọ